दुग्ध सहकारी संघ बागलुङको १८ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
बागलुङ, १५ कात्तिक । बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाको उद्घाटन राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामबहादुर जिसीले गर्नु गरेका थिए...
फेरि उकालो लाग्न थाल्यो सुन भाउ, कति पुग्याे त ?
काठमाडौँ, १५ कात्तिक । निकै उतारचढावबीच कारोवार हुँदै आएको सुनको मूल्य कात्तिक महिना लागेसँगै पुनः उकालो लाग्न थालेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७००...
एनआईसी एशिया बैंक र टिथ सेभर्सबीच सम्झौता
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र टिथ सेभर्स प्रालि त्रिपुरेश्वरबीच एनआईसी एसिया बैंकका सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुलाई टिथ सेभर्स डेन्टल क्लिनिकमा दाँतसम्बन्धी उपचार गराउँदा १५% सम्म छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ...
माछापुच्छ्रे बैँककाे रिक्त रहेकाे संचालकमा सिग्देल नियुक्त
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको यही कात्तिक ८ गते बसेको संचालक समितिको ४०८ औं बैठकले संचालकको रिक्त पदमा हरिभक्त सिग्देललाई आगामी वार्षिक साधारण सभा सम्मको लागि नियुक्त गरेको छ । सर्वसाधारण शेयरधनीहरुका...
मेगा बैँकको आफ्नै लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आफ्नै कार्यालय रहेको भवनबाट मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरका साथै रिसोर्स सेन्टर समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसअघि मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर मार्फत आफ्ना...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १५ औँ वार्षिकोत्सव
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको १५ औं बर्ष सफलतापूूर्वक पुुरा गरी १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा केक काटेर १५ औंै वार्षिक उत्सव मनाइएको...
घोराहीमा खुल्यो एक करोडको लगानीमा मेट्रो दाङ रेष्टुरेण्ट एण्ड बार
घोराही, ९ कात्तिक । घोराही १५ स्थित बिआर डेण्टल नजिकै झन्डै एक करोडको लगानिमा घोराहीका तिन जना युवा मिलेर मेट्रो दाङ नाम दिएर रेष्टुरेण्ट एण्ड बार सन्चालनमा आएको छ । केही समय अगाडिदेखि सो...
रुपन्देहीमा तिहारका लागि ५२ लाख बराबरको कृत्रिम माला अयात
-प्रतिक पौडेल भैरहवा, ९ कात्तिक । रुपन्देहीको बेलहीया नाका भएर यस पटक तिहारका लागि ५२ लाख बराबरको कृत्रिम माला भित्रिएको छ । तिहार आउन केही दिन बाँकी रहेकाले यो केही बढ्न सक्ने भैरहवा भंसार...
भरतपुर कार्यालयद्धारा आठ अर्ब राजश्व सङ्कलन
चितवन, ९ कात्तिक । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रु आठ अर्ब ५८ लाख ६४ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा रु सात अर्ब ४५ करोड...
ललितपुरको कुमारीपाटीमा कामना सेवाकोे १०० औँ शाखा
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २० स्थित कुमारीपाटीमा कात्तिक ८ गते आफ्नो नयाँ १०० औँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । बैंकका...
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच मर्जरसम्बन्धी अन्तिम सम्झौता
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक नेपालबीच मर्जरसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंमा आज आयोजित एक समारोहबीच दुई बैंकका अध्यक्षहरुले अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा...
डोल्पाको दुनैमा नेपाल लाइफको नयाँ शाखा सञ्चालनमा
डोल्पा, ८ कात्तिक । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक कार्यक्रमकाबीच डोल्पाको दुनैमा शाखा कार्यालय उद्घाटन गरी कारोबार सुरु गरेको छ । उक्त औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले डोल्पाको दुनै शाखाको...
« 123456… 833 »